IVanilla Show - ingxoxo yevidiyo yesizukulwane esisha
I-roulette yengxoxo edume umhlaba wonke
ISIQEPHU ESILANDELAYO SENGXENYE-ROULETTE
Abasebenzisi abangaphezu kuka-1 000 000 namakhulu emifudlana eku-inthanethi
Ingxoxo entsha ngokuphelele yevidiyo
Lapha kuphela lapho ungabona ngqo amakamelo okuxoxa namantombazane bese ukhetha ngendlela oyithandayo! Akusekho ukufakwa kuhlu okungapheli okunamagumbi agcwele abafana. Sikhetha imifudlana ethakazelisa kakhulu ukukuphakamisa. Ngaphezu kwalokho, sivimba ngokuzenzakalela noma yimaphi amavidiyo nabasebenzisi okungenzeka ukuthi abangavumelekile.
Amakamelo azimele nawomphakathi
Ngenxa yezinketho zobumfihlo eziguquguqukayo, ungaxoxa nomuntu ongashadile noma neqembu labangane. Ngasikhathi sinye igumbi elilodwa lingabonisa kufika kuma-webcam amane, ngenani elingenamkhawulo lababukeli. Ayikho i-roulette yengxoxo engaziqhayisa ngamathuba anjalo.
Uhlelo lokusakaza ividiyo
Ukuze wazi kusengaphambili ukuthi intombazane noma umfana onekhamera yewebhu kuzoba ku-inthanethi, futhi ukuze abalandeli bakho bazi ukuthi bazokulindela nini kusengaphambili. Ngenxa yalokhu, sidale uhlelo lokusakaza ividiyo. Konke okudingeka ukwenze ukubhalisela umsebenzisi futhi uzohlala usesikhathini lapho i-roulette yakhe ivuliwe.
Imibuzo neminye imidlalo
Ukugcina ungena engxoxweni yethu, sidale inqwaba yemidlalo emincane. Le roulette nemibuzo yakudala, umdlalo wokuqagela ngisho ne-roulette yokugembula. Zingadlalwa ngasikhathi sinye ngokuvula ikhamera yewebhu futhi ngenkathi ukhuluma nabanye abantu engxoxweni yakho.
By the way, ungakha imibuzo yemibuzo ngokuzenzakalela, kodwa futhi uziqambele yona wedwa! Ukuwadlala, ngeke ujabule kuphela, kepha futhi uzowina izinhlamvu zemali ezingasetshenziselwa isipho sentombazane noma ukuziphindiselela kumenzi wobubi. Faka imidlalo emincane engxoxweni yakho yevidiyo futhi ababukeli bakho bazokubonga.
I-roulette yethu yengxoxo - indawo enhle yokuhlangana nabantu abasha!
Ayikho enye insizakalo yokuphola ezokunikeza ithuba lokushesha futhi uxoxe namantombazane nabafana abaningi bukhoma. Insiza yethu yewebhu izosheshisa abantu esibajwayele futhi izongena esikhundleni sezinkulungwane zezinsuku zakho! Nikeza izipho, udlale ngothando, hlaya noma nje uxoxe ngobuqotho. Uzoqonda ngokushesha ukuthi lo muntu ukufanele yini noma kufanele afune okuningi. Kulokhu, uma ungamthandi lowo muntu, mane uchofoze inkinobho bese ukhubaza ikhamera yabo yewebhu. Ngeke kube khona intukuthelo nezimo ezingezinhle. Sikholelwe, ngosuku olujwayelekile konke kuzoba nzima kakhulu.
Xhumana ngendlela entsha!
Uma ufaka ikhamera yewebhu ekhaya nesikhathi esithile samahhala. Qiniseka ukuthi uyazama. Lapha uzothola okungaphezu kothile omuhle ongaxoxa naye kwikhamera yewebhu, ngenkathi ujabulela inqwaba yama-minigames, ukusakazwa kwamavidiyo amnandi, umsakazo, nezinye izinto eziningi ukukugcina ubungazwa. Abantu abaningi abasha ngisho namantombazane bayazithanda izingxoxo zevidiyo futhi basebenzise i-web cam ngenkuthalo. Njengoba ukujwayela ngosizo lwevidiyo, ngaphandle komhlangano womuntu siqu, kuphephe kakhulu. Ngaphandle kwalokho, kulula kakhulu ukuvula ikhamera yevidiyo bese uthola ngokushesha umfana omuhle kunokuba ubulale usuku lonke usuku olulodwa olubi. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwe-roulette akudingi ukubhaliswa.
Thola imali ngemifudlana yakho!
Siyaqonda ukuthi umbukiso wekhwalithi awunakwenzeka ngaphandle kokuhola. Ngakho-ke, uma une-18, ingxoxo yethu inezindlela ezimbalwa zokuthola imali yangempela ngokusakaza kwakho:
Cela ababukeli bashiye amathiphu kumsingathi. Ngale njongo, kunenkinobho ekhethekile, lawa macebiso afakwa ku-akhawunti yakho futhi ungawakhipha ku-akhawunti yakho yeYandex noma i-PayPal.
I-Chat Roulette ikuvumela ukuthi wakhe uhlu lwezinsizakalo futhi ubanikeze imali. Isibonelo, kungaba ukubingelela okudala, noma ukucula ingoma ethile, kanye nazo zonke izinhlobo zezicelo ezingajwayelekile, ukudansa noma ukumamatheka nje.
Thumela ukubuyekezwa noma izindaba ezinesixhumanisi esihambisanayo bese uthola u-30% wazo zonke izinkokhelo kuzo zonke izinkokhelo ezivela kubasebenzisi abasebenzisa lezo zixhumanisi futhi baba abasebenzisi abasha.
Ungalayisha okuqoshiwe kombukiso ku-YouTube futhi uzuze ngokukhangisa, noma ngokuxhumana ngqo nabakhangisi ukwethula imikhiqizo yabo.
QALA UMBONO WAKHO FUTHI UFUNDE